Jereo ny lalan'ny tranoben'ny Loire ao Frantsa | Bezzia
Susana Garcia | 28/04/2021 10:00 | Lifestyle, Tsangatsangana
Raha efa mieritreritra ny dianao manaraka ianao dia tsy azonao atao ny tsy mahita ny sasany amin'ireo tolo-kevitray. Misy toerana izay hahagaga antsika foana, satria toa nalaina avy amina tantara iray izy ireo. Ny lalan'ny trano mimanda ao amin'ny Lohasahan'ny Loire any Frantsa Iray amin'ireo tranonkala ireo izay tsy mamela ny olona tsy hiraharaha. Izy io dia iray amin'ireo zotram-pitiavana sy mahatalanjona indrindra azo tanterahina any Frantsa mahafantatra faritra iray feno lapa misy hatsaran-tarehy tsy mampino.
rehefa miresaka ny tranon'ny Loire izahay Miresaka momba ireo fanamboarana ireo izahay izay hita any amin'ny tapany afovoan'ny làlan'ny reniranon'i Loire ao afovoan'i Frantsa. Maro amin'ireo lapa ireo no niandohany tamin'ny Moyen Age, namboarina ho trano mimanda tena izy, na dia noforonina koa aza ny chateaux taty aoriana, izay natao ho fonenan'ireo andriana. Androany ireo lapa ireo dia ao amin'ny World Heritage Site.
1 Omano ny fitsidihanao
3 Lapan'i Chenonceau
4 Trano Chambord
6 Castle an'i Chaumont
Omano ny fitsidihanao
Ao amin'ny faritry ny Loire Valley dia afaka mahita trano mimanda dimam-polo mahery isika, izay manahirana ny fahitana azy rehetra. Izany no mahatonga ny zavatra atao matetika dia ny lisitra misy ireo trano mimanda mahaliana indrindra, manao lalana hanaronana azy ireo. Ny ankamaroany dia eo anelanelan'ny tanànan'ny Angers sy Orleans, noho izany ny lalana dia matetika no atao amin'ny iray mankany amin'ny iray hafa. ny ny fotoana tsara indrindra dia mandritra ny lohataona sy ny fararano, rehefa tsara ny andro, satria tsy vitan'ny mitsidika ny trano mimanda ianao, fa koa ny manodidina miaraka amin'ny ala, zaridaina na tanimboaloboka.
Ity lapa tamin'ny taonjato faha-XNUMX ity dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra toy ny fiarovana mimanda amin'ny ady. Izy io dia voahodidin'ny hady iray ary afaka mandeha amin'ny lalambeny ianao na miditra ao anaty mba hahitanao ny fasan'ny Earl of Sully na sary vita amin'ny tafondro taonjato faha-XNUMX.
Ity dia iray amin'ireo lapa tsara tarehy indrindra ao Loire ary iray amin'ireo malaza indrindra koa. A Lapan'ny taonjato faha-XNUMX fantatra amin'ny anarana hoe 'lapan'ny vehivavy' noho ny fiovana naterak'ireo vehivavy samihafa rehefa nandeha ny fotoana. Izy io dia iray amin'ireo atitany manaitra indrindra ary manana hatsarana tsara ety ivelany miaraka amin'ny loko fotsy, ny turrets ary ny zaridaina. Ho fanampin'izany, fanangonana sary hosodoko manan-danja ataon'ny mpanakanto toa an'i Rubens na Murillo no miandry antsika ao anatiny.
Ity no trano mimanda tena malaza hafa izay tokony hahitanao ny fidirana mialoha mba tsy havela tsy hanana azy io. Mpanjaka Francis I no nampiasa ilay ala manodidina tsara tarehy hihaza ary izy no iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny reniranon'i Loire izay misy efitrano efajato mahery. Manome antsika ohatra tsara amin'ny Renaissance frantsay izy io ary misy tohatra lehibe ao anatiny izay nolazain'izy ireo fa noforonin'i Leonardo da Vinci.
Ny zaridaina tsara indrindra amin'ny trano mimanda ny Loire dia toa hita ao amin'ny Castle of Villandry. Ity lapa ity dia natsangana nandritra ny vanim-potoana Renaissance ary manana zaridaina tena lehibe sy mahatalanjona izay iray amin'ireo tsara tarehy indrindra any Frantsa. Manana endrika sy lohahevitra samy hafa izy ireo amin'ny ambaratonga telo.
Castle an'i Chaumont
Ity dia hita amin'ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra izay tsy tokony hodinganintsika mihitsy. An'i Catherine de Medici ity lapa ity ary natsangana tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Trano lehibe misy zaridaina anglisy sy asan'ny zavakanto izy io. Izy io dia trano mimanda somary tafaverina amin'ny laoniny miaraka amin'ireo tilikambo manamarika ireo tranobe angano mahazatra ireo. Ankoatr'izay, avy eo amin'ny terrasiny dia ahitanao ny fahitana mahafinaritra an'i Loire Valley.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Làlan'ny tranoben'ny Loire any Frantsa
Fofona tongolo, ahoana no ahafahako mamongotra azy amin'ny fomba mandaitra?